Union Minister U Kyaw Tin receives US Under Secy of State – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of the Republic of the Union of Myanmar, received Mr. David Hale, Under Secretary of State for Political Affairs of the United States of America, at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw at 4:30 pm.
During the discussion, they cordially exchanged views on matters relating to the further strengthening of bilateral relations and cooperation, recent developments of Myanmar’s efforts in resolving the situation in Rakhine State and providing the assistance by the United States in Myanmar’s democratic transition process.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. David Hale အား ယနေ့ ၁၆၃၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စ ဖြေရှင်းရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လတ်တလော ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အမေရိကန်မှ အကူအညီပေးအပ်ရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။